काठमाडौं, २९ भदौ । कोरोना संक्रमणका कारण कोरोना बिशेष अस्पतालमा बुटवलमा थप एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका ५ की एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्‍यु भएको हो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सुचना अधिकारी बिस्नु गौतमका अनुसार अस्पतालमा २१ भदौमा कोरोना पुष्टि भएपछि भर्ना भएकी ४७ वर्षीया महिलाको आईसीयूमा उपचार गर्दागर्दे आज बिहान मृत्यु भएको हो ।
उनी मिर्गौला रोगबाट पीडित रहेकोले डायलासिस भइरहेको डा. गौतमले बताए । योसँगै कोरोना विशेष अस्पलामा मृत्यु हुनेको संख्या १४ रहेको छ । शव व्यवस्थापन सेनाले गर्ने तयारी गरेको अस्पतालका फोकल पर्शन डा. शुर्दशन थापाले रातोपाटीलाई बताए ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसका कारण मोरङका दुई जनाको उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये एक जना विराटनगर र अर्को धनपालथानका हुन् ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–६ का ४० वर्षीय पुरुषको गए राति मृत्यु भएको र उनमा दीर्घ रोगको कुनै समस्या नदेखिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिए । शुक्रबार प्रतिष्ठानको ल्याबबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई शनिबार राति साढे १० बजे कोभिड अस्पतालमा सारिएको थियो ।
त्यस्तै आइतबार दिउँसो विराटनगर–१२ का ७० वर्षीय पुरुषको पनि प्रतिष्ठानकै कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई विराटनगरस्थित म्याक्स अस्पतालले प्रतिष्ठानमा रिफर गरेको थियो । उनलाई भदौ १६ गते कोराना पुष्टि भएको थियो ।
ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र श्वासप्रश्वासमा गाह्रो हुने लगायतका समस्या देखिएपछि उनलाई सुरुमा उपचारका लागि म्याक्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । योसँगै प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६ पुगेको छ ।
त्यस्तै महोत्तरी जिल्लाको लोहारपट्टी नगरपालिका–३ बस्ने एक ६० वर्षीय पुरुषको कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएको छ । कोरोना लागेर ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि भदौ २२ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको उनको आइतबार मृत्यु भएको प्रदेश नं २ का स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विजय झाले बताए ।
जाने होईन त National Advance Computer Institute & Technology ?
संसारभरका अनौठा मास्कका तस्बिरहरु
तपाइको आज : २०७७ जेठ ७ बुधवारको राशिफल
यस्तो काहानीमा ‘पीके २’ बन्दै, आमिरको स्थानमा रणवीर देखिने